:Bọchị: Nọvemba 16, 2019
TCDD General Nnyocha na Nnyocha Ọmụmụ Amalite; Nlele na Mkparịta ụka General CD Fenerbah na TCDD Fenerbahçe Ọzụzụ na Ntị na Nlekọta malitere n'okpuru ndị isi nke TCDD General Manager Ali İhsan Uygun. Republic of Turkey [More ...]
Site na mbata nke YHT, ọnụ ọgụgụ ndị njem na Sivas ga-abawanye na 3; Nleta na nyocha site n’ụbọchị tupu Onye isi ala nke Nnukwu Mgbakọ nke Sivas. Dr. Mustafa Şentop, Train High Speed, nke ga-arụ ọrụ n’oge na-adịghị anya. [More ...]
Ministri nke hasgbọ njem akwadebela iwu ọhụrụ na-esochi ọnụ ọgụgụ na-arị elu nke ihe mberede ụgbọ ala na-egbu egbu na-adịbeghị anya. Ministri nke hasgbọ njem akwadebela iwu ọhụrụ na-esochi ọnụ ọgụgụ na-arị elu nke ihe mberede ụgbọ ala na-egbu egbu na-adịbeghị anya. [More ...]
Atụmatụ ụgbọ okporo ígwè Bursa Ururu Ọ bụghị na Agenda nke Ministry; Agbanyeghị akụkọ ozi ụgbọ oloko hızlı na-agbadata ebumnuche, mana naanị nkwado nke Bursa na-atụ anya n'aka ndị isi na njem abụghị ụgbọ oloko ahụ. Anya anyị na ntị anyị na Ankara maka ọrụ ụgbọ okporo ígwè dị n’obodo. [More ...]
Vidio Na-eme Anụ Isi site na Obodo Metro; Metro Istanbul, onye otu Mgbakwunye Obodo nke Istanbul, keritere ihe ngosi site na akaụntụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-ekwu na o kwesịghị “gbasaa ında n'ụgbọ njem ọha. Ekekọrịtara na akaụntụ Twitter Twitter isi Twitter [More ...]
Genzọ Agenda Trabzon na TSIAD; Ndị otu ọgbakọ izu ụka Trabzon na ndị na-azụ ahịa na-azụ ahịa nke Trabzon Erzincan Railway Platform, onye otu obodo Ortahisar na onye otu Kansụl Metropolitan Mustafa Yaylalı gara. Onye isi ala TSİAD [More ...]
Mmecha nke Melet Bridge na Ordu; Site na ntinye aka nke Ordu Obodo ukwu, ụlọ ọhụrụ a wuru na Osimiri Melet na mpaghara Altınordu nke Ordu, nke bụ azụ nke okporo ụzọ na mpaghara Oke Osimiri Ojii na Oke Osimiri Ojii. [More ...]
Ọrịa ezumike na Bọọdụ ime obodo na Tranzon; Ezie na ụgbọ ala na-arụ ọrụ njem ụgbọelu na -eme njem njem ọha na eze na-arụ ọrụ kwa ụbọchị n'ime obodo Trabzon Metropolitan, ntuziaka nke Magazin Obodo Murat Zorluoğlu [More ...]
A ga-emepe emechi akwụkwọ TCDD. 21 February 2018 meghere ma nweta ezigbo mmasị site na General Directorate nke TCDD Transportation Inc. bụ arịrịọ maka ịmaliteghachi mmeghe nke usoro ọrụ ahụ. [More ...]
Young ntá ego Association of Turkey (TUGIAD) onyeisi oche Anil Alirıza Şohoğl dị na nkọwa nke na ọnụ ọgụgụ mara TSI. Dị ka Turkstat na Turkey na 15 2019 afọ na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-enweghị ọrụ na August [More ...]